Raxma Cali Yuusuf | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Kalyo xanuunku waa xaalad caafimaad darro oo lasoo derista binii aadamka qarkii .caafimaad darradasoo ka bilaabata kadib marka uu kudhaco caabuq infekshan ah Kalyaha iyo kaadi mareenka. Waxaa jira caduro badan oo ka dhasha Kalyo xanuunka kuwaso Ay ka mid yihiin. · Cudurka sonkorowga · Cudurka dhiig karka · Cudurka baawasiirka. Shaqooyinka ay Kalyuhu uqabtaan jirkeena waxaa ka mid ah: · Samaynta hoormoneska · Shaandhaynta dhiigga laga shaandhaynayo qashiinka · Soo saarista kaadida · Tirtirista sunta dhiigga soo raacda iyo wixii la mid ah Maxaa Sababa Kalyo Xanuunka? · Biyo kugu filaan oo aadan cabin · Milixda oo kubadan cuntada …
Jabtadu waa cudur infekshan bakteeriya ay dhaliso. Bakteeriyada dhalisa cudurka Jabtada waxaa loo yaqaan “Neisseria gonorrhoea”. Waa Maxay Calaamadaha Iyo Astaamaha Lagu Garto Cudurka Jabtada? Astaamaha xanuunku waxay soo baxaan inta udhaxaysa 1 ilaa 14 cisho ragga iyo dumarku ma ahaa isku calaamado. Ragga ayeey inta badan ka muuqdaan calaamaduhu. Calaamadaha lagu garto inay raggu qabaan cudurka Jabtada waxaa ka mid ah: 1. Dheecaan huruudi ama cadaan ah oo ragga ka yimaada. 2. Cuncun ama wax ka yimaada dabada. 3. Barar kudhaca mindhicirka iyo kaadi mareenka. 4. Kaadida oo badata. Calaamadaha lagu garto dumarka qaba cudurka Jabtada waxaa ka …
Waa Maxay Cudurka Aydhiska “AIDS”? Aydhis “AIDS” waa koox cuduro ah oo la arko marka dhibaato soo gaadho habka difaaca kaasoo uu wax yeeleeyay feyriska HIV. Maxaa Sababa Cudurka Aydhiska? Cudurka Aydhiska waxaa sababa HIV feyriska loo yaqan kasoo marka horre qofka kudhaca wuxuuna qofka ku sababaa innuu dilo unugyada cad ee dhiigga oo loo yaqaan ”T-Lymphocytes” kuwa oo ay shaqadoodu tahay inay jirka kadifaacan cudurada. Waxaa uu leyahay cudurka Aydhisku calaamado laga arko qofka marka uu bilowga ku yahay iyo calaamado laga arko marku cudurku qofka kufaafo . Calaamadaha lagu arko oo horre waxaa ka mid ah: …
Sawirkaan korre waxaa laga soo qaaday cilmi baaris lagu sameeyay dhinaca computerka, xaquuqdiisa malahan Tuke Somalism, balse waxaan u addeegsanaynaa qaab cilmiyan ah oo aanan ku jirin wax ganacsi iwm. Kansarka waa cudur kudhaca unugyada jirka bini’aadamka kaasoo ku sababa unugyada korriin aan joogsi lahayn. Islamarkaana unugyadu aanay uqaybsamayn sidii caadiga ahayd waxana halkaa kadhalanaya unugyo aan loo baahnayn oo cusub kuwaas oo marka danbe noqonaya sidda burada oo kale. Burada waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo kala ah: Buro ‘benign’: waa mid aan khatar weyn lahayn unugyada ay ka samaysantahay waxay u egyihiin unugyada caadiga ah ama caafimadka …
Sawirkaan korre waxaa laga qaaday Qardho oo ahayd goob dhulkeeda fidsanyahay fardana daaqayaan. Qardho waa magaalo madaxda gobolka Karkaar ee Puntland, Soomaaliya, waa magaalo aad ubaaxad wayn. Waxaa baaxada magaalada Qardho lagu qiyaasa in kabadan 18km oo isku wareeg ah. Magaalada Qardho horey waxaa loo oran jiray “Ceel la qoday”. Magaalada Qardho waxa ay ku taalaa waqooyiga barri ee Soomaaliya. Waxay kamid tahay saddexda magaalo ee ugu waa weyn ee Puntland kuyaal. Magaalada Qardho waxay u kala baxdaa 8 xafadood oo aad u waa wayn oo kala ah: New qardho Qoryacad xingood hose Xingood sare Kaambo Kubo Shinbiraale 8.Xorgoble Tirada …
Qandho waa heerkulka jirka oo kor uga kaca sidda caadiga ah ama waa marka jirka aadamiga uu soo galo organism jeermis ah oo waxyeelo ugaysan Kara jirka. “Jawaab-bixin jirku kabaxsho inuu iska difaaco jeermiskaas, oo lagaga hortago kulayl ay maskaxdu amarto in jirka heerkulkiisa kor loo qaado ayaa loo yaqaan ama lagu magacaaba qandho.” Qaybta maskaxda ah ee kor uqaada heerkulka jirka waxaa lagu magacaaba “Hypothalamus”. Sidda badan heerkulka jirka marku caadiga yahay waa 37.5C laakiin marka qandho timaado wuxuu garaa 38.5C ilaa 40C. Xagee Laga Cabbiri Karaa Heerkulka Jirka, Maxaa Lagu cabbiraana? Waxa laga cabbiraa heerkulka jirka: Kilkisha Afka …